Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi iley oo Waashay Ayaa Shaqaalihii Dalka Kala Diray Bishan Ramadaan – Noora Afgaab
Cabdi iley oo Waashay Ayaa Shaqaalihii Dalka Kala Diray Bishan Ramadaan – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ June 27, 2014
Shir maanta ilaa makhribkii lagu jiray oo uu shaqaalaha Cabdi iley u qabtay ayaa lagu soo bandhigay liistka shaqaalaha heer degaanka ka tagaya degmooyinka iyo qabaleeyada.
Liiskaas oy dhamaanba kujiraan masuuliyiinta sare ee kabineetka Cabdi iley, gudida fulinta iyo in ka badan lix boqol oo shaqaalaha kala duwan ee degaanka ah ayaa loo sheegay in ay kasoo shaqeynayaa arimaha nabadgalyada, iyo fidinta waxyaabaha propaganda u noqonkara xisbiga laga bilaabo 1da bisha ramadan ilaa sodonkeeda. Shaqaalaha iyo masuuliyiinta ayaa waxaa lawareegaya gudoomiyayasha degmooyinka iyo gobolada oo halkaas ku sugnaa, waxaana lagu soo qoray shaqaalaha meelaha ayna aadka u tagin maamulada degmooyinku.
Hadaba shaqaalahan ayaa waxaa loo sheegay inay kusoo diyaar garoobaan bari oo kaliya, ka dib shaqaalahan oo aad u wadayaaban ayaa caawa kasoo baxay shirkaas layaabkaleh. Mudada lagu jiro haawlgalkan ayaa waxaa sitoos ah u kala hogaamin doona shaqaalaha hogaanka nabadgalyada ahna madaxweyne ku-xigeen mr Cabdulahi Itobiya oo hogaaminaya gobolada Jarar, Nogob iyo Qoraxay. 2.Cabdixakiin oo ah madaxweyne kuxigeen iyo madaxa haawlaha guud oo isna hogaamin doona shaqaalaha u baxaya gobolada Shabeele, Siti iyo Afdheer. 3 Cabdifatax oo ah madax xafiiska caafimadka iyo madaxweyne ku-xigeen oo isna hogaamin doona shaqaalaha u baxaya gobolada Dollo, Faafan iyo Liiban.
Hadaba arintan ayaa hadii loo hirgaliyo sida hada loo soo go’aamiyey waxaay noqoneysaa in aanay wax shaqo ihi ka jiri doonin deegaanka mudadaas bisha ah, gaar ahaan magaalada Jigjiga ee aay ku yaalaan xafiisyada heer degaaan. Arimaha uu Cabdi iley uga danleeyahay waxaan soo sheegi donaa dib.
Dhinaca kale maanta waxaa xafiisyada heer degaank lakeenay ticket lagu galayo riwaayad ay dhigeyso Maryan Mursal, ticket ayaa waxaa lagu qasbayey inay shaqaaluhu gataan ama laga jaro mushaharkooda, 100 birr taas oo ku tusineysa sida uu wadanku foowdoobay.